Delestazy : Governemanta Ntsay no fototra -
AccueilRaharaham-pirenenaDelestazy : Governemanta Ntsay no fototra
Delestazy : Governemanta Ntsay no fototra
29/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Toa tsy mahita mangirana mihitsy ity ny Malagasy eo amin’ny tontolon’ny herinaratra. Raha notanterahin’ny Filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina, tokoa mantsy ny fampanantenana nataony tamin’ny fanafoanana ny delestazy, nandritra ny fotoana nitantanany ny firenena, miverina indray izany ankehitriny, ary nofy ratsy ho an’ny vahoaka malagasy mihitsy. Tsiahivina mantsy fa tena delestazy navaivay mihitsy no niainan’ny vahoaka malagasy nandritra ny fotoan’ny Tetezamita, ary ny Filoha teo aloha, izay nametra-pialana no nahavita fanamby nanafoana izany tamin’ny alalan’ny fanampiana ny orinasa Jirama teo amin’ny fampitaovana, sns.
Ankehitriny, miverina indray ny nofy ratsin’ny Malagasy sy ny ngidin’ny delestazy noho ny hafitsoky ny governemanta Mapar, izay tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian. Hatreto mantsy, mbola tsy nahitam-bahaolana ny delestazy, fa dia miaina anaty haizina avokoa ireo mponina amina faritra maro, tsy ny eto an-drenivohitra ihany fa hatrany amin’ireo faritra manerana an’i Madagasikara mihitsy. Tsy hay intsony koa, na ny mpanolotsaina manokan’ny praiminisitra, Lalatiana Rakotondrazafy, no tsy mahafehy ny andraikitra sahaniny, ka tsy manome tolo-kevitra ny praiminisitra amin’ny famahana ny olan’ny fahatapahan-jiro eto amintsika ankehitriny.
Raha ny nambaran’ny teo anivon’ny orinasa Jirama mantsy, tsy maharaka intsony ny tahirin-tsolika ahafahan’ireo milina mpamokatra herinaratra mihodina ara-dalàna, ka mampihena ny herinaratra vokariny. Voalaza ihany koa fa efa nisy ny fifampidinihina teo amin’ireo minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola (MFB) sy ny minisiteran’ny Angovo (MEH), ary ireo mpandraharaha ara-tsolika mpamatsy ny Jirama. Mbola tsy nahenoana vaovao kosa aloha, hatramin’ny ora nanoratanay, ny tapaka tamin’izany fihaonan’ny telo tonta izany. Ny hany nohazavain’ny minisitry ny MEH, Lantoniaina Rasoloelison, dia manomboka amin’ny herinandro ho avy izao, dia hihena ny fahatapahan-jiro. Midika izany fa tsy ho foana akory fa mihena fotsiny ihany…
Araka izany, toa lasa miantehitra amin’ny hazo boboka ny vahoaka ankehitriny, satria any amin’ny governemanta mantsy izao ny baolina amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana, ka anisan’izany ny famahana ny olan’ny vahoaka amin’ny lafiny maro.